Marka hantida dad weynaha xilka lagu raadsanayo | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka, Cabdiraxmaan Yusuf Cumar Al-Cadaala, ayaa hantida shacabka Soomaaliyeed, iyo lacgta ku ku jirta qasanadda Dowladda ku faytaamaya, si uu ugu soo baxo kursiga sumaddiisu tahay HOP#069.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa lacagta Dowladda, kuraas Baarlamaan ugu iibineysa xildhibaanno taabacsan Madaxweynaha mudadu ka dhamaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo ay ugu horreeyaan shaqsiyaad ku heyb ah xildhibaannadii mucaaradka ahaa afartii sano ee la soo dhaafay.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka, Cabdiraxmaan Yusuf Cumar Al-Cadaala, ayaa ka mid ah shaqsiyaadka Madaxtooyadu qorsheysay in sanadkaan loo boobo kursiga, wuxuuna musharrax u yahay Kursiga HOP#069, oo uu hadda ku fadhiyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Odawaa.
Cabdiraxmaan Al-Cadaala, wuxuu maalmahaan safar ku joogaa degaannada Galmudug, wuxuuna kulamo la yeelanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada, hayeeshee la yaabka ayaa ah inuu wax uu u baxshay “Salaan iyo is barasho” uu ku bixiyay lacag ku dhow $50,000 oo doolar, magaalooyinka Hobyo iyo Cadaado.
Al-Cadaala, wuxuu ahaa shaqaalo ka tirsan Warbaahinta Dowladda muddo dheer, wuxuuna Xukuumadda ku biiray dhowr bilood ka hor, ma aha ganacsade ka mid ah maalleyda dhaqaalaha lagu tuhmayo, hayeeshee, lacagta hooyooyinka Muqdisho canshuurta looga qaado ayuu ku faytaamayaa, si ugu fariisto kursi uusan ka bixi karin matalaaddiisa.
Wasiir Al-Cadaala, wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadkii horiyay colaadihii Muqdisho ka curtay dabayaaqadii April, wuxuuna ugu horreeyay dadkii u biratumayay muddo kordhintii Farmaajo sameysatay ee dagaallada sababtay.
Inkastoo Cabdiraxmaan Odawaa, qudhiisa lagu eedeeyo inuu kursiga uu ku fadhiyo ee HOP#069, uu ku soo iibsaday ku dhawaad 500,000, hadana waxaa lagu xasuustaa wax qabadkisii afartii sano ee la soo dhaafay, kaas oo degaankiisa iyo dalka oo dhan laga dareemay.
Waxaa jira shaqsiyaad fara badan oo Kooxda Farmaajo, qorsheysay in ay kuraasta u boobaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin, Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere, Maxamed Cabdullahi Kooshin, Taliyaha NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Wasiirka Amniga DF Xasan Xundubey Jimcaale.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, ayaa dhawaan sheegay in Dowladdu la daalaa dhacayso dhaqaalo la’aan baahsan, hayeehshee xeel-dheerayaasha doorashooyinka ayaa hadalka Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ku tilmaamay boor isku qaris la doonayo in lagu boobo lacagta ku jirta qasnadda Dowladda loona adeegsado doorashooyinka.